एक दशकदेखि कोमामा बाँचिरहेकी महिला कसरी बनिन् आमा ? | Makalukhabar.com
एक दशकदेखि कोमामा बाँचिरहेकी महिला कसरी बनिन् आमा ?
पुस २३, काठमाडौँ । अमेरिकाको एरिजोना राज्यमा एक दशकदेखि कोमामा बाँचिरहेकी एक महिलाले बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । यस घटनाले सबैलाइ चकित बनाएकाे छ ।
बिरामी महिलाको यौन शोषण (दुर्व्यवहार) भएको हो कि भन्ने यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको आशंका छ ।
पीडित महिला फिनिक्स इलाकास्थित हेसीन्डा हेन्थकेयरको एक क्लिनिकमा भर्ना भएकी थिइन् । हेसीन्डा हेल्थ केयरले यस घटनाबारे धेरै जानकारी दिएको छैन । क्लिनिकको तर्फबाट घटनामा सहानुभुति मात्रै प्रकट गरिएको छ ।
अमेरिकी टिभी च्यानल सीबीएसका अनुसार नवजात शिशु स्वस्थ छ । साथै सो च्यानलले गर्भवती महिलाले बच्चा नजन्माउँदा सम्म क्लिनिकका कर्मचारीलाई महिला गर्भवती भएको जानकारी नभएकाे पनि उल्लेख गरेकाे छ ।
फिनिक्स प्रहरीका एक प्रवक्ताले यस घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताए । उनले महिलाले २९ डिसेम्बरमा बच्चा जन्माएको पनि जानकारी दिए । समाचार एजेन्सीका अनुसार महिलालाई हरेक क्षण हेरचाह गरिरहनुपर्ने कारण उक्त कोठामा मानिसहरु धेरै आउने जाने गर्दथे ।
स्रोतका अनुसार उक्त घटना पश्चात् क्लिनिकले आफ्नो नियम नै परिवर्तन गरेको छ । नयाँ नियम अनुसार अब कोही पुरुष महिला बिरामी भेट्न आउँदा साथमा एक महिला कर्मचारी लिएर जानुपर्ने छ ।
क्लिनिकको तर्फबाट जारी गरिएको बयानमा भनिएको छ, ‘हामीलाई यो घटनाको बारेमा हालसालै मात्र थाहा भयो । हामीलाई निकै दुःख लागेको छ । आफ्ना बिरामीको सुरक्षा र स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु हाम्रो मुख्य काम हो ।’
बिभिन्न देशको नगद र लागू औषध सहित ३ जना पक्राउ